सर्वप्रथम प्रदेश नम्बर ६ ले प्रदेश सभाको दोस्रो बैठकबाटै विवादरहित ढङ्गले प्रदेशको नाम कर्णाली र स्थायी राजधानी वीरेन्द्रनगर तोकेको थियो । हालै मात्र ४ नं प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम गण्डकी र स्थायी राजधानी पोखरा राख्ने निर्णय गरेको छ । तर बाँकी प्रदेशहरु यो विषयमा अन्यौलमा छन् । प्रदेश सभाको बैठक बस्न थालेको पाँच महिना बितिसक्दा पनि प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा छलफल हुन सकेको छैन । नाम र राजधानीका विषयमा सांसद पनि विभाजित छन् ।
प्रदेश नं. २ को नाम र राजधानीबारे सत्तारुढ र विपक्षी दलबीचको विवादका कारण प्रदेश सभामा यो विषयले प्रवेश नै पाएको छैन । सत्तारुढ सङ्घीय फोरम र राजपा प्रदेशको नाम मधेस राख्नु पर्ने पक्षमा छन्रु। तर काङ्ग्रेस र नेकपा त्यसमा सहमत छैनन् । काङ्ग्रेसले प्रदेशको नाम मिथिला उत्तम हुने बताउँदै आएको छरु। नेकपाले जानकी, मिथिला वा मिथिला–भोजपुरा बनाउन सकिने बताउँदै आएको छरु। त्यस्तै, राजधानी जनकपुर वा वीरगञ्ज बनाउने भन्नेमा विवाद छरु। तर प्रदेश सभामा यी दुवै विषयमा अहिलेसम्म औपचारिक छलफल भएको छैन ।
प्रदेश नं. ३ मा नामभन्दा पनि राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने चर्को विवाद छरु। अहिलेको अस्थायी राजधानी हेटौँडा अपायक भएको भन्दै नुवाकोट, काभ्रे, भक्तपुर र चितवनका सांसदले प्रदेश सभामा प्रस्ताव नै दर्ता गराएका छन् । प्रदेश ३ को पनि नाममा उस्तै अन्यौलता छ ।
यता प्रदेश ५ मा पनि नाम र राजधानीबारे औपचारिक छलफल हुन सकेको छैनरु। नामभन्दा पनि राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषय पेचिलो छरु। मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको गृह जिल्ला समेत रहेको दाङलाई राजधानी बनाउनु पर्ने माग अझै सेलाएको छैनरु। दाङको पक्षमा बाँके, बर्दिया, रोल्पा र पूर्वी रुकुमका सांसद पनि खुलेर लागेका छन् रु। तर अहिलेको अस्थायी राजधानी बुटवललाई नै राजधानी तोक्नुपर्ने माग पनि उत्तिकै चर्को छ । त्यसका लागि नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल र काङ्ग्रेसका बालकृष्ण खाण सहितका यो भेगका नेताहरु लागेका छन्रु। प्रदेशको नाम बुद्ध, लुम्बिनी वा यी दुवैलाई जोडेर राख्न सकिने र त्यसमा विवाद नहुनेमा नेताहरु विश्वस्त छन् ।
यस्तै, प्रदेश ७ को सभामा छलफल हुन सकेको छैनरु। प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसले नाम र राजधानी तोक्न माग गर्दै २७ जेठमा संसद सचिवालयमा प्रस्ताव नै दर्ता गराएको छ । तर यो प्रस्तावमाथि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल समेत भएको छैनरु। राजधानी धनगढी, डडेलधुरा वा डोटी लैजाने विषयमा पनि हरेक दलभित्र छुट्टाछुट्टै मत छन् । ती सबैलाई सम्बोधन गरेर सहमतिमा नाम र राजधानीको टुङ्गो लगाउन सरकारलाई सकस परेको छ ।